Russia neChina vanotevera tsoka dzeKorea uye vachaenda kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Russia neChina vanotevera tsoka dzeKorea uye vachasiya Windows, maRussia vachida Linux
Musi waMay 20 takanyora chinyorwa umo isu takadzokorora itsva hapana chinoshamisa: South Korea inoronga kudzikisa Windows kuti ishandise yako yega vhezheni yeLinux. Hazvishamise kana tikatarisa nhau, asi kana tikatarisa kuti havangazviite pachivande kana kutsamwisa United States, asi nezvenyaya yehupfumi. Avo vachatevera mutsoka dzenyika yeAsia nekusiya Microsoft system inyika mbiri dziri pedyo navo: Russia neChina. Musiyano mukuru ndewekuti izvi vachazviitira chengetedzo.
North Korea haisati yasarudza kuti osiya Windows here. Izvo zvichaita saizvozvo kana iwe ukawana yako yese software kuti umhanye paLinux pasina kusapindirana, chimwe chinhu chavachaita zvechokwadi. Ipapo isu tine Russia neChina: vese vacharega kushandisa Windows nyaya yenyika yekuchengetedza uye vachadaro pazvombo zvavo zvemauto. Iyo sisitimu yekushandisa iyo ichashandiswa nevaRussia ichadaidzwa AstraLinux, yakabva kuna Debian yakagadzirwa nekambani yeRussia RusBITech kubvira 2008.
Astra Linux, iyo inoshanda sisitimu yeuto reRussia
Russia inofunga kuti Windows inogona kunge iine madhoo ekumashure, chimwe chinhu chavasingakwanise kuongorora nekuti yakavharwa mashandiro. Pakupedzisira, maRussia anotenda kuti, kana vakashandisa sisitimu yekushandisa yeMicrosoft, masevhisi eU.S. anogona kuvasora vasingazvizive.
Kana zviri zvechiChinese, sarudzo ingadai yakaitwa nekuda kwehondo yehunyanzvi iyo yakatanga ne "Huawei Nyaya". Musiyano nemaRussia ndewekuti China haizoshandise Linux-based operating system, asi imwe yakatanga kubva pakutanga. Pakati pezvikonzero pane kuburitsa kwaEdward Snowden, uyo akafumura kuti zvese zviri zviviri Linux, macOS uye Windows zviri nyore kubirira neUnited States. Uye, kunyangwe paine kugoverwa kweLinux kubva kunenge chero nyika, iyo "baba" yekernel yayo ihafu yeAmerica.
Zvimwe zvikonzero nei China haidi kuziva chero chinhu nezveUS ndeyekuti ivo vanoda kuvharidzira kucherwa kweBitcoins, havadi kupa maAmerican chero mukana muhondo yeAI (ungwaru hwekunyepedzera) uye kuti CEO weGoogle anoramba zvirongwa zveinjini yekutsvaga yeChina.
Chinhu chega chandinogona kutaura nezve zvese izvi ndechekuti ini ndiri 100% ndinobvuma kusiya Windows. Ndakazviita makore anopfuura gumi apfuura uye ndinofara, uye kuti handina kuzviita nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza. Zvakare, maChinese nemaRussia vanozove noutano hwakanaka kana vakashandisa mashoma masisitimu anorema kupfuura aMicrosoft, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Russia neChina vanotevera tsoka dzeKorea uye vachasiya Windows, maRussia vachida Linux
Pasina chinangwa chekunanzva shangu, chokwadi ndechekuti maChinese nemaRussia haisi nyaya inoseka kana vachinge vafunga chimwe chinhu (paYT, semuenzaniso, une mavhidhiyo ekuti maChinese anoshandura sei "akarasa" Hardware uye "achinje" iyo, senge mabhuku ekunyorera (ayo ari mashoma kushandisa) kuti ishandiswe pakombuta makomputa; kana graphic makadhi aishandiswa kukohwa macryptocurrencies, uye kuti mu "dzidziso" yaisabatsira mukutamba mitambo, kumhanya mitambo paWind * ws).
Nekudaro, ivo vanoita yavo vhezheni ye "Linux" (kana Android) ingori nyaya yenguva.
Zvinenge "zvinosuruvarisa" kuti veUS vadzokere shure: vaida kuzviita vakanaka pakuverevedza Google software kubva kwavari uye maChinese havana kana kusimuka (nekuti vaigona kuzviitira vega) asi vakavamonera kuti vapedze kumusoro kukanda Mhepo * ws yemusoro xD (M $ inofanira kunge ichidhonza bvudzi rake kunze).
Hapana munhu ari "kunanzva shangu" sekureva kwako: China ine mukana (wezvehupfumi nesainzi) kugadzira chero OS kana vachida, nekuti yaizove nerutsigiro rwehurumende kwete chirongwa chekuzvipira senge ReactOS iyo kubvira payakatangwa ikozvino kuyedza kubvisa ... Zvinosuruvarisa kune Latino seni kuona kuti maChinese nemaEuropean chete ndivo vane mabhora ekubvisa joko reiyo «American standard».
Pasi pekudzidza muchivande
Ad Blockers mu Chrome Vacharamba Vachishanda?
kuvhuraSUSE Leap 42.3 inosvika kumagumo ekutenderera kwayo muna Chikumi 30, 2019